Ixesha kunye nabahlobo 46
Yeyiphi imibala, i-Metals kunye ne-Stones enikezelwe kwiPlanti eziSixhenxe?
Kukho imibala esixhenxe kwi-solar spectrum, ebomvu, i-orenji, tyheli, luhlaza, blowu, indigo, violet. Olu lwahlulo lwerhasi yelanga yiprism kwaye ibonakaliswa kumphezulu. Le mibala isixhenxe ingabonakaliswa ukubuyela kwiziko kwaye iphinde ibe kukukhanya kwemibala Le mibala kuthiwa iyahambelana neeplanethi ezisixhenxe, mars, ilanga, mercury, saturn, jupiter, venus, inyanga. Kukwanjalo nakwizinyithi zosixhenxe, i-iron, igolide, i-mercury, i-lead, i-tin, ubhedu, isilivere. Imibala, isinyithi kunye neeplanethi kuthiwa ziyahambelana kwaye ziyahambelana. Amatye, i-garnet, i-amethyst, ilitye legazi, iidayimani, i-agate, irubhi, isardonyx, isafire, opal, itopazi, iturquoise, kufuneka zidibene neenyanga ezilishumi elinambini; elowo kuthiwa uneempembelelo ezithile xa enxiba ngeentsuku ezithile, kodwa ngakumbi ngenyanga enyanga yakhe. Ababhali kwizifundo zobugqi banike ulwahlulo olwahlukeneyo kunye nembalelwano imibala, isinyithi kunye neeplanethi. Nokuba yintoni na eyahluliweyo eyamkelweyo, injongo ibeka ukuba yeyiphi imigaqo kunye neendlela emazilandelwe ukufumana izibonelelo ngokunxiba, ngokwahlukeneyo okanye ngokudibeneyo, imibala, isinyithi kunye namatye.
Ngaba ukuNxiba kweMibala, iiNtsimbi kunye naMatye kufanele ukuba kuQingqwe yiNkalo yePlani leyo phantsi koNxibi Wazalwa?
Ukuba umntu uyakholelwa ekusebenzeni kokholo; ukuba unokholo; ukuba akazukulimaza abanye ngokunxiba imibala, isinyithi kunye namatye-Ewe. Ukuba uyibona iyinto ehlekisayo, kodwa uzama ukubona ukuba iqhuba njani; ukuba uyakholelwa kwimbonakalo yemibala, isinyithi kunye namatye kwaye unokuyinxiba ngenjongo yokufaka into engalunganga okanye impembelelo embi nakubani na — Hayi.
Ngaba banayo imibala, ii-Metals kunye neTye kunye naziphi na iimpawu ezizodwa, kwaye Bangaze bazalwe kanjani ngaphandle kokujonga iiplanethi?
Imibala, iintsimbi kunye namatye aneenqobo ezizodwa, ezilungileyo okanye ezimbi. Kodwa ukomelela kombala ngamnye, iintsimbi kunye namatye kugqitywa ngohlobo lwemvelaphi yayo, indlela yokulungiselela kwayo, okanye impembelelo enikezelwe kuyo. Umntu otyekele ekugculeleni ukucinga ukuba imibala inemilinganiselo ethile kwaye iya kuvelisa iziphumo ezithile, uya kuba nesizathu sokutshintsha umbono wakhe ukuba unxibe ibhatyi ebomvu phambi kwenkunzi.
Indoda evavanya i-magnets ayizukuyithatha njengenkcaso nje okanye zibubuvuvu ingxelo yokuba iintsimbi ezithile zineempawu zobugqi. Akukho mntu uthandabuzayo ukuba kukho umtsalane owahlukileyo onokuthi amatye abe nawo ngabantu kuyo yonke iminyaka. Ngaphandle kwezizathu zoqoqosho okanye zokuhombisa imibala ineempembelelo ezithile kwiimvakalelo zabantu. Ihlala iqatshelwa ukuba xa abanye abantu bangena kwimimandla ethile yengqondo okanye yemvakalelo, babona imibala ethile eqhelekileyo kwimeko yabo. Umzekelo: abophuli-mthetho abaye bavuma ityala bathi babona bomvu nje phambi kwekhomishini yabo yokubulala. Kwelinye icala, abo banikwa amaxesha okucamngca, bathi babona umbala ophuzi okanye wegolide xa bedlula kwimeko yokuphumla okuzolileyo okanye injongo yokunqwenela.
Iintsimbi zinokubaluleka kokusebenzelana nemimoya kunye nokuxabiseka, kunye nokusetyenziswa okuqhelekileyo okubekwe kuyo, kwaye kunjalo namatye. Kodwa ezi nqobo kufuneka zifundwe kwaye zifundwe. Iimvakalelo kufuneka zibalumkise ngaphambi kokuba amaxabiso abo asetyenziswe ngokukuko kwaye ngaphandle kwengozi emzimbeni nasengqiqweni. Ukufundela kunye noqeqesho luyimfuneko ekufumaneni ulwazi lweenqobo zobugqi kunye nokusetyenziswa kwesinyithi kwinzululwazi yetsimbi. Lowo uqikelela okanye onemibono malunga nemibala, isinyithi kunye namatye, iingqondo zakhe zangaphakathi zingavulwanga, ongazukuziqeqeshela ingqondo yakhe kwaye aqeqeshe ingqondo yakhe, unokwenza ngokholo olungaboniyo kwaye afumane iziphumo, kodwa uya kuba nochulumanco kwaye abe Wenze into yokugculela, kwaye uhlala eyimfama.
Umntu unokunxiba imibala, iintsimbi okanye amatye ngaphandle kokuba ajonge iiplanethi xa enawo loo mandla azelwe lulwazi, kwaye olodlula naliphi na ifuthe lemibala, iintsimbi okanye amatye. Ukholo olomeleleyo nolungenakushukunyiswa lokuba akukho mandla makhulu anokumenzakalisa, sisicombululo kuyo nayiphi na impembelelo evela kwizinto ezibonakalayo. Olu lukholo namandla avela kwintshukumisa elungileyo, ukucinga okulungileyo, isimo sengqondo esifanelekileyo. Xa umntu enale, imibala, iintsimbi kunye namatye, ngempembelelo yazo iiplanethi ayinakuba nempembelelo entle kuye. Kodwa ke, mhlawumbi, kuya kufuneka angazinxibi.
Zeziphi iileta okanye amanani aqhotyoshelweyo okanye acaciselwe iiplanethi?
Iileta, amanani, amagama, amatywina, ii-sigels, zichazwe ngendlela eyahlukileyo kwiiplanethi ngababhali ngeenkolelo ngeenkwenkwezi, i-alchemy kunye nomlingo, kwaye iiakhawunti ezahlukeneyo kunye nokusetyenziswa kunokufumaneka kwiincwadi ezithetha ngezi zifundo. Akukho bango lenzwayo kulolo lwazi, okanye ilungelo lokudluliselwa. Akukho lwazi lumlingo malunga neeleta namagama “iiplanethi” ezinokuthi zidluliselwe ngqo kwiincwadi okanye kwiifom ezibhaliweyo. Iincwadi zinokunika ulwazi oluninzi, kodwa azikwazi ukudlulisela ulwazi. Ulwazi kufuneka lufunyenwe ngokuzama komntu ngamnye. Ulwazi lufumaneka ngokubeka iziphumo zamava kwezona zisetyenziswayo ezilungileyo. Ulwazi lweeleta, amanani kunye namagama luya kuza ngokuvavanya kwaye luhlalutye kwaye lufundise malunga namacandelo kunye neendlela zoonobumba kunye nokudityaniswa kwazo. Kulowo utyekelo lwengqondo yakhe kwicala lobugqi, iileta, amagama, amagama, kufanelekile ukuba bacinge kwaye banike ingxelo ngabo, kodwa bangazami ukuyibeka loo nkcazo-nkolelo ide ithi loo mbono ithembeke. Ubunyani abunakufunyanwa ngokuchaza malunga nokwenza kunye nokubhala ngoonobumba, amanani, amagama, imibala, iintsimbi okanye amatye. Isiqinisekiso ngezi zinto siza kuphela ngobuchule kunye nolawulo lwezinto okanye amandla ezinophawu lwangaphandle, kwaye ezimelwe yiminqweno, ukuthanda kunye neemvakalelo ngaphakathi kuye. Uninzi olunokuthi lube zi-alchemists kunye namagqwirha beze kusizi kuba bezamile ukulufezekisa kwihlabathi ngaphandle, kufuneka kwenziwe ntoni ngaphakathi ngaphakathi.
Imibala ebonakalayo yimbonakaliso yamazwe e-psychic kunye neemvakalelo. Isinyithi yimigangatho okanye ukuqina kwezinto ezingabonakaliyo apho umoya wento nganye uqhagamshele kuyo kwaye usebenza kuyo. Kunokuthethwa okufanayo ngamatye. Iintsimbi kunye namatye yimagnethi okanye ngombane. Apho ziya khona, isixhobo okanye amandla adibene nawo anokubanjiswa kwaye asebenze, njengoko amandla ombane esebenza ngesinyithi, okanye njengoko umbane uqhutywa ngocingo lobhedu. Ukunxiba imibala, isinyithi okanye amatye kunokuphakamisa kwaye kukonwabise oko ngaphakathi, okuhambelana nento leyo okanye ukunyanzelwa ngaphandle, kwaye kunokubambisa ezo zinto okanye amandla okusebenza ngokuqonda kwabo kwimbalelwano yabo ngaphakathi. Ngolawulo lwangaphakathi kuphela olungenakulawulwa.